Tu Maung Nyo – 28th June Letter to Suu from Regime, My take | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← US urges Burma to ensure Daw Suu freedoms
is North Korean Gov runningarestaurant in Rgn? →
NLD လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှု “အားလုံး” ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန် နှင့် လူမှုရေး အသင်း ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ လျှောက်ထားလာလျှင် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် သာပါသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေလျှင် မည်သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟု ဖေါ် ပြထားခြင်းမရှိပါ။
“နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကို ဆန့်ကျင် နေသည့်သဘောလည်းသက်ရောက်နေသည်”
ပကတိအရှိတရား နှင့် မိမိအတ္တဘာဝအင်အား အကြားက ကွက်လပ်ကို တံတားခင်းပေးရမည်မှာ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ပကတိအရှိတရားကို ရိုးရိုးစင်းစင်းနာခံကြသူများမှာ ပြုပြင်ရေးသမားများ (ဝါ) ဖန်ခွက်ထဲရေတစ်ဝက်ရှိခြင်းကို နှစ်သက် လက်ခံကြသူများ၏ အဆုံးစွန်သော လုပ်ဟန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ပေးသလောက်၊ ရသလောက်ယူကြမည်သာဖြစ်သည်။
ထိုသူများသည် ယခုအခါ “လွှတ်တော်”ဆိုသည်များထဲတွင် သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း တိုင်းပြည်နှင့် လူထုအကျိုးရှိမည့်ကိစ္စ များကို ချမှတ် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်သည့် စွမ်းအားမရှိသလို၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူထုအကျိုး ထိခိုက်စေမည့်ကိစ္စတွင်လည်း ကန့်ကွက် တားဆီးနိုင်သည့်အင်အား မရှိကြောင်း လက်တွေ့သိမြင်နေကြရပြီဖြစ်သည်။
ရောဂါဘယကို ကုသပျောက်ကင်းစေနိုင်သည့် အစွမ်းထက်ဆေးဝါးများမှာပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (side effect) ပါရှိမြဲ ဖြစ်ပါသည်။ လူထုကို စည်းရုံးပြီး လူထုစွမ်းအား (people’s power) ဖြင့် ပကတိအရှိတရားဆိုသည်များကို တော်လှန်ကြရာတွင်လည်း အချို့သောအနိဋ္ဌာရုံများကို မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမည်မှာ ဓမ္မတာသဘောပင်ဖြစ်ပါသည်။
ပြပြင်ရေးသမားများသည် တော်လှန်ရေးကို ကြောက်ကြသည်။ သို့အတွက် တော်လှန်ရေးတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်သည့် အချို့သောအနိဋ္ဌာရုံများကို တစ်ဆိတ်တစ်အိတ်လုပ်ကာ ပြည်သူများကို ချောက်လှန့်တတ်ပါသေးသည်။
တစ်ဦးကောင်း တစ်ဖွဲ့ကောင်းဖြင့်လည်း ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်ဝဲ လက်ယာ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပအင်အားစု အသီးသီး၏ လက်တွေ့ကျပြီး အလုပ်ဖြစ်သည့် ညီညွတ်မှုစွမ်းပကားသည် အခရာ ကျသောအခန်းကပါဝင်နေပါသည်။
တော်လှန်သောနည်း/ လူထုနည်းနှင့် လူထုစွမ်းအားကို လက်ရှိအစိုးရသည် အင်မတန်ကြောက်ပါသည်။
သာမန်ပြည်သူတစ်ဦးပါလို့ သူတို့ ဘယ်လိုပင် ပြောဆိုနေစေကာမူ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်သည် သူတို့အတွက် “ရင်မအေးဖွယ် Issue တစ်ခု” ဖြစ်နေပါသည်။ ထိပ်လန့်နေပါသည်။ သို့အတွက်လည်း “ဒီပဲယင်း ဖြစ်ရပ်” ကဲ့သို့ ရာဇဝတ်မှု/ အကြမ်းဖက်မှုမျိုးဖြင့် ရမ်းကားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
လူထုနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ရေနှင့်ကြာပမာ ဆက်စပ်သွားတဲ့အခါ၊ လူထုကြီးက တော်လှန်တဲ့သဘောတရားကို ဆုပ်ကိုင် လာတဲ့အခါမှာ အင်မတန် အစွမ်းထက်မြက်သော ရုပ်ဝတ္တုအင်အားဖြစ်လာပါသည်။